Umnyama woLondolozo lweOrlando -Amalungelo oLuntu kunye nobuGcisa bokuKhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
25 Ngamana 2013
Ukusuka kwi-Rainbow-ukukhanya okuluhlaza okudibanisa iibhlorho
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 25. Meyi 2013
Ukuqiqa sisenzo sokulinganisa ngaphezulu komnyama.
Ukukhanya okungapheliyo kobusuku kwakhanya ngoMgqibelo kusihlwa kwiholo laseDüsseldorf phezu kwesixeko.
Iphulo elithi “Ukusuka Kumnyama” I-PixelHELPER imele ukunyamezelana ngakumbi nangokuchasene intiyo.
Umnyama ubonakalisa ithemba kunye nokugqibelela. Nanini na xa abantu bebona umnyama, inye into eqinisekileyo: ubumnyama nemvula abanalo igama lokugqibela.
Iprojekhthi yobugcisa bokukhanya "Ukusuka kwi-Rainbow" ngu-Oliver Bienkowski yiprojekthi eqhubekayo apho iibhulorho ezaziwayo, izakhiwo kunye nolwakhiwo lweedolophu ziguqulwa zabizwa ngokuba ziibhulorho zemvula. Ukuza kuthi ga ngoku, ukongeza kwibhulorho yezibuko eMedienhafen eDusseldorf, ibhulorho kaKarl Branner eKassel iphinde yenziwa ngokutsha. Le projekthi yahlulahlula abantu kwi-Documenta kwaye yavelisa umdla onamandla kubakhenkethi bezobugcisa bamanye amazwe. Isango laseBrandenburg laye laguqulwa laba ngumnyama womnyhadala wezibane. IKassel Bergpark Kaskaden edumileyo, eyinxalenye ye-UNESCO yeLifa leMveli leHlabathi, ikwanikwe umnyama wepeyinti. Ngale nto, umzobi ukhuthaza ukunyamezelana ngakumbi kunye nentiyo.
Ukusuka kwi-Rainbow-ukukhanya okuluhlaza okudibanisa iibhlorho Meyi 6th, 2020Oliver Bienkowski